Zvese nezve iyo Bengali katsi | Noti Katsi
Monica sanchez | | Inobereka
Iyo Bengal katsi kana Bengali katsi inoshamisa furry. Chitarisiko chayo chinoyeuchidza zvikuru ingwe; Nekudaro, isu hatifanire kunyengerwa nechitarisiko chake, sezvo aine hunhu hweye nyoro uye inoyevedza katsi yekumba.
Icho chizvarwa chitsva, asi chiri kuramba chichiwedzera kufarirwa. Uye ndezvekuti, ndiani asingade kuve nembada diki kumba? Ngatidzidzei zvakawanda nezvake.
1 Bengali katsi nhoroondo
2.1 Kachena bengal kati
3 Makore mangani Bengal kana Bengali katsi kurarama?
4 Hunhu hwakadii?
5 Kuchengeta sei Bengal kana Bengali katsi?
6 Yakawanda zvakadii bengal kati inokosha?
Bengali katsi nhoroondo
Ino yakanaka katsi yakabuda semuchinjikwa pakati pekati dzekumba nedzesango, kubvira payakatanga semusanganiswa wembwa yekuAsia ingwe (Prionailurus bengalensis) uye mamwe marudzi emakitsi epamba: Ocicat, Abyssinian, Britain Shorthair uye Mau weIjipita. Nekudaro zvaigoneka kuve nemusango anotaridzika musango, asi aine hunhu uye hunhu hunodakadza.
Pakazosvika ma40s pakanga patove nekatsi dzeBangal muJapan, asi rudzi rwacho haruna kukura kusvika makore makumi maviri nemakumi matatu gare gare, muUnited States, kwadzakatanga kuratidzwa muna 20. iyo International Cat Association (ICA).
Zvisinei, pane masangano, akadai seCFA, asina kuagamuchira semhando nekuti haigamuchire mahybrids. Chizvarwa chechina chete Bengalis ndivo vanogona kutora chikamu mumitambo yavo nechinangwa chekuita kuti genetics yemusango iwedzere kusanganiswa. Asi chokwadi ndechekuti kune vafudzi vanoramba vachisarudza zvienzaniso uye vayambuka kuti vavandudze rudzi; uyezve nhasi hazvichadiwe kuyambuka mbada katsi nekatsi dzekumba.
A bengal kati pasofa
Iyo Bengali katsi Imhuka hombe, inorema kusvika pa9kg kana iri yechirume, uye inosvika ku4kg yemukadzi. Muviri wakasimba kwazvo uye une mhasuru, unodzivirirwa nebvudzi pfupi, rakapfava, gobvu. Musoro wakapamhama, wakakomberedzwa, une maziso egirini, nzeve diki uye muswe wakakora, uri pakati nepakati.
Zvinoenderana neyakajairwa, zvinosungirwa kuti uve netema muswe muromo, dumbu rine huta uye tsokaIyo jasi inongova brindle, uye base base inogona kuve kirimu, goridhe, orenji, nyanga dzenzou, yero kana chena.
Kachena bengal kati
Mufananidzo - Amolife.com
Unoyeuka maalbino tiger zvakanyanya, handiti? Hunhu hunhu hunotaridzika hunotarisa, hunhu hwekuzvigutsa hwaanotora iye achirova zuva ... Iyo chena bengal kati imhuka yakanaka iyo iwe uchakurumidza kuve shamwari yepamoyo yemhuri yese. Ehe, iwe unofanirwa kuziva kuti kuve chena iwe unofanirwa kuti usazotarisana nekuratidzwa kuna mambo wezuva rakareba, nekuti zvikasadaro mukufamba kwenguva iwe unogona kuita gomarara reganda.
Makore mangani Bengal kana Bengali katsi kurarama?
Chero bedzi paunogamuchira kutarisirwa kwakakodzera, anogona chaizvo kurarama makore 9 ne15. Ehezve, anofanirwa kugara mukati memba, nekuti kana tikamuburitsa, hupenyu hwake hunotarisirwa hunogona kuderedzwa.
Iyo Bengali katsi katsi yakakosha kwazvo. Akangwara kwazvo, ane rudo, uye anoshingaira. Anofarira kutamba, kuongorora, kudzidza zvinhu zvitsva, uye kuve nemhuri yake.. Uye zvakare, ndeimwe yemhuka dzinosimbisa chisungo chakasimba nemunhu mumwe chete, kunyangwe ichiuya pakuda vanhu vese vari mumba.
Iye anofarira kusvetuka, kukwira uye, kunyangwe zvichiratidzika kuva zvisina kujairika, kushambira, chimwe chinhu chaanoziva kuita nemazvo chaizvo sezvo iri hunhu hwaakagara nhaka kubva kuAsia ingwe katsi, iyo inofanirwa kuvhima mhuka yayo mumatope.
Kuchengeta sei Bengal kana Bengali katsi?
Kana iwe ukafunga kugara neBangal katsi iwe unofanirwa kupa inotevera tarisiro:
Pese pazvinogoneka, inokurudzirwa kwazvo kupa chikafu chechisikigoChero Yum Kudya kweKitsi, kana Barf (nerubatsiro rwechikara chikafu). Icho chikafu icho iwe chaunoshivirira chakanakisa uye icho chinounza iwe mabhenefiti mazhinji, makuru acho ari anotevera:
Mazino akasimba, akagwinya uye akachena
Yakanakisa kukura uye kusimudzira
Muchiitiko chekusagona kusarudza iyi mhando yekudya, imwe nzira yakanaka ndeyekupa chikafu chisina zviyo kana zvigadzirwa, seApplaws, Orijen, Taste of the Wild, pakati pevamwe nekuti izvi hazvizokuunzire chero dambudziko. Ehe, iwe unofanirwa kuziva kuti bhegi re7kg rinodhura: rinogona kuve nyore kukosha makumi mana emaeuro, asi mari inofanirwa kupihwa yakadzikira zvakanyanya pane kana ikapihwa chikafu chakachipa nekuti chine mapuroteni emhuka akawanda.
Ikati yeBangali ndiyo inonyanya kushanda kati. Inoda kutambwa nezuva rega rega, kakawanda. Zvikamu zvitatu kana zvina zvinogara kwemaminitsi gumi nemashanu zvichakuchengetedza uri muchimiro, uye unenge wakadzikama uye uchifara.
Zvinogona zvakare kuve zvinonakidza kumudzidzisa kufamba naye sunga. Kana iwe usingazive kuzviita, usanetseke. Vhura ichi chinyorwa Tinokutsanangurira iwe.
Bvudzi inofanira kukweshwa kamwe pazuva nekadhi kana kamu kuitira kubvisa fur fur. Hazvina kufanira kuishambidza. Munguva yekunyungudika mwaka zvinokurudzirwa kupa Maruta kudzivirira bvudzi rakawandisa kubva pakuungana padumbu rako.
Maziso anogona kucheneswa mazuva ese 3-4 uchishandisa yakachena gauze (imwe yeziso rega rega) yakanyoroveswa neiyo chamomile infusion.
Nzeve dzinofanira kucheneswa kamwechete pasvondo ne gauze yakachena uye kudonhedza maziso wezvechiremba. Iwe unofanirwa kuwedzera 1-2 madonhwe uye nekuchenesa chikamu chekunze kwenzeve imwe ne gauze.
Kunge chero imwe kati, mukati megore rekutanga rehupenyu zvichave zvakakodzera kumutora iye kuna vet kuitira kuti iwe uise iyo majekiseni anodiwa uye nokuda neutering kana kumurasa kana iwe usinga farire kuiberekesa.
Segore uye pagore, zvinokurudzirwa zvikuru kuidzosa kuti utore majekiseni emishonga uye kuitarisa kuti uone chero dambudziko rinogona kuitika.
Uye zvakare, pese paunofungidzira kuti uri kurwara, uchafanirwa kubvunza nyanzvi kuti ikurape.
Yakawanda zvakadii bengal kati inokosha?
Kana iwe uchinyatsoda kugara nekati yeBangali, uye iwe uchifunga kuti wakagadzirira kupa zvese kutarisirwa kwaachazoda muhupenyu hwayo hwese, unofanirwa kufunga kuti mbwanana inodhura dzakakomberedza 1500 euros yakatengwa kubva kunochengeterwa vana.
Isu tinoziva kuti unochida, saka ngatipedzei chinyorwa ichi nekunamatira pikicha yemifananidzo yeBangali kana Bengal kati:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Inobereka » Ikati yeBangali, furry ine kutaridzika kwemusango uye nemoyo muhombe